Daawo Video: Khiyaanada ku Qarsoon dacwada Muranka Badda ee Soomaliya iyo Kenya oo lasoo bandhigay (Waraysi) - Hablaha Media Network
Daawo Video: Khiyaanada ku Qarsoon dacwada Muranka Badda ee Soomaliya iyo Kenya oo lasoo bandhigay (Waraysi)
HMN:- Waxaanu Halkan Idiinku soo gudbinaynaa Waraysi ku saabsan dacwadda badda Somalia iyo Kenya ee ka socota Maxakamadda Cadaaladda ee aduunka (ICC) Iyadoona lasoo Bandhigay Khiyaanada ku Qarsoon.
MUUQAAL: Xiisad ka Taagan Cadaado,
1. Maxaa keenay dacwadda ?, 2. Haddii Kenya dacwad ka qabto maxay u soo dacwoon waday?
3. Maxaa keenay in Somalia soo dacwooto? , 4. Maxaa loogu aadiyey xilliga doorashada?
5. Kenya maxaa cadayn ah oo ay haysataa? , 6. Badda hadda la isku haysto maxaa loo siiyey Soma Oil and Gas?
Su’aalahaas waxaa ka jawaabaya aqoonyahan Abdisalam Haji Ismail oo in muddo ah daba socday khiyaanooyinka lagu hayo badda Somalia iyo halista Somalia kun socoto waxaana waraystay Weriye Abdulqaadir Mursal ee Dalmar TV Columbus, Ohio.